Sidee loo iibsan karaa dib u eegis tayo leh oo boggayaga internetka ka eeg bogga sare ee Google?
Waxay timaaddaa iyada oo aan dhihin dhisida profile profile backlink waa habka saxda ah ee aad u wadi lahayd website-kaaga sare ee SERPs Google. Waa maxay sababta? Sababtoo ah sababaha dhabta ah ee loo yaqaan 'organic backlinks' ayaa hore loo yaqaanay inay ka mid yihiin qodobbada ugu xoogan (saddexda astaamood ee muhiimka ah, inay noqdaan kuwo sax ah) oo la tixgeliyo Google marka la siinayo booska jaranjarada liiska natiijooyinka raadinta. Waxaa intaa dheer, kuwa horeyba u yaqaan sida loo soo iibsado dib-u-tayada tayada waa inaanay marnaba ka hor istaagin inay maalgashadaan wakhti iyo dadaal si ay u kasbadaan dib-u-celin dabiici ah oo leh PR sare ama dhisaan iyaga gacanta. Taasi waxay had iyo jeer bixin doontaa, waan hubaa.
Maxay ka badan tahay - waxbarashada ugu xoogan ee waxbarashada ama dawladaha (i. e. , oo ka imanaya cutubka EDU iyo dusha GOV ilaha internetka oo leh kalsoonida iyo awooda sare) way ka xoog badan yihiin. Waxay si weyn u wanaajin karaan muuqaalka internetka ee laga yaabo in laga yaabo in laga yaabo in kasta oo ka mid ah boggaga ganacsiga ama blogs - inay siiyaan magacooda calaamad adag oo ku saabsan raadinta, iyo bixinta wacyiga dadweynaha oo wakhti isku mid ah. Oo halkan yimaad kaliya hal xaqiiqo qabow, oo ah kuwa guurka ah ayaa weli la yaab leh sida loo iibsado dib-u-tayada tayada ee ka socda bogagga waxbarashada ama dawladaha. Aan la nimaadno - helitaanka xidhiidhada mushaar bixinta kaliya waa wax aan macquul aheyn. Waxaan ula jeedaa mararka qaarkood uma baahnid inaad ogaatid sida loo iibsado dib-u-celin tayo leh oo dhan - sababtoo ah waxay noqon karaan oo kaliya shaqaale. Sidee? Inta badan, waxay u baahan doonaan shaqadaada adag adigoo qoraya sheeko qiimo leh, si ay ugu dambeyntii u hesho dib-u-noqoshada la doonayo oo qiimo leh.
Ku soo noqoshada dhibicda, aynu isku dayno inaan ogaanno - sida loo soo celiyo bedelka tayada. Waxyaabahani waa in aysan jirin tilmaamo caalami ah ama talooyin oo leh natiijo ballan qaad ah. Waxaan ula jeedaa inaadan haysan karin qorshe hawleed cad oo sax ah si aad si toos ah iyo si macquul ah u hesho dib u bixinno lacag bixin ah (i. e. , links kuwaas oo dhab ahaantii u shaqeyn kara horumarkaaga, isla mar ahaan iyada oo aan la soo qaadin calanka casaan leh Google). Xaqiiqdii, codsashada xirriiryada mushahar bixinta waa wax aan ahayn nidaam sheyga ah ee Gray-Hat ama xitaa Black-Hat SEO. Dabcan, inta badan dib loo soo iibsaday ayaa badanaa la filayaa in ay u muuqdaan kuwo u muuqda dabiiciga oo dhan - labadaba kuwa raadinaya,. In kastoo, weli waxaan aaminsanahay inaad ka fiicnaan laheyd inaad iska ilaaliso mashiinka raadinta - haddii aadan rabin inaad ku hesho rigoore rikoodh ah.Hase yeeshee, haddii aad wali dareemayso geesinimo kugu filan si aad u heshid dib u bixinta kharashka oo dhan, u tixraac qodobbada soo socda, ugu yaraan in aan la qabsanin ama aan lagu duubin:
ilaha ama pals kuwaas oo si cad u sheegaya in ay helaan lacag celin lacag ah oo iib ah.
Hubi in mawduucyadaada laga yaabo in ay leeyihiin mawduucyo adag iyo bogga internetka ee ku habboon naftaada, ama ganacsiga.
Laba jeeg ah ku samee maamulka domain, bogga bogga, iyo buundooyinka PageRank si aad u hesho gaadiidka ugu badan iyo kalsoonida laga helo dhegeystayaasha ballaaran.
Fikrad ahaan, waa inaad heshiis la sameysid barta internetka ee ku yaala xaafaddaada. Marka la eego inaad diyaar u tahay inaad bixiso gabal qiimo leh, taasi waxay qaadan doontaa waqti. Haddii kale, waxay kaa qaadi doonaan lacag macquul ah. Waa wax ku saabsan ganacsiga, sax?
Wheelslink (is-dhaafsiga), PBNs (haddii kale, shabakadaha shabakadaha gaarka loo leeyahay), iyo sidoo kale adeegyo raqiis ah oo bixiya xirmooyin tayadoodu hooseeyso ee gadaal badan, ama emaylka dhibka leh ee si xun u riixaya meelaynta ilaha sare ee PR - iska ilaali "bixiyeyaasha" sida kharashka oo dhan. Si fudud sababtoo ah waxay horey ugu yeerayeen ciqaab rikoor ah (ama xitaa mamnuucid joogto ah). Wakhtiga ama ka dib, Google wuxuu u imaanayaa iyaga oo dhan - labadaba "bixiyeyaasha" oo aan khayaali aheyn, iyo nasiib darro "macmiil" Source .